Nyansa kasa te sɛ onipa (1-36)
‘Onyankopɔn bɔɔ me de fii n’adwuma ase’ (22)
‘Ná mewɔ Onyankopɔn nkyɛn sɛ odwumayɛni a onim adwuma paa’ (30)
“Nnipa mma na na wɔda me koma so” (31)
8 Ɛnyɛ nyansa na ɛreteɛm yi? Na ɛnyɛ nhumu na ama ne nne so yi?+ 2 Egyina baabi a ɛwɔ soro+ wɔ kwan ho,Wɔ nkwanta so. 3 Egyina kurow apon ano,Wɔ abobow ano,Ɛkɔ so teɛm denneennen sɛ:+ 4 “Mo, nnipa, mo na merefrɛ mo;Mema me nne so frɛ obiara.* 5 Mo, agyimifo, momma mo ani ntew;+Mo, nkwaseafo, munnya ntease koma. 6 Muntie, efisɛ nea mereka no ho hia,Na m’ano ka nea ɛteɛ. 7 Efisɛ m’ano ka nokware; ɛka no brɛoo,Na m’ano kyi abɔnefosɛm. 8 M’anom nsɛm nyinaa yɛ trenee. Nkontomposɛm ne nsɛm a akyinkyim biara nni mu. 9 Ne nyinaa teɛ* ma wɔn a wɔwɔ nhumu,Na eye ma wɔn a wɔanya nimdeɛ. 10 Momfa me nteɛso, na ɛnyɛ dwetɛ,Na momfa nimdeɛ, na ɛnyɛ sika kɔkɔɔ amapa,+ 11 Efisɛ nyansa ye sen ɛpo mu abohene,*Na ade a ɛsom bo biara ne no nsɛ. 12 Me, nyansa, me ne anitew na ɛte;Manya nimdeɛ ne adwempa.+ 13 Nea Yehowa suro kyerɛ ne sɛ wobɛtan bɔne.+ Mikyi ahomaso+ ne ahantan ne ɔkwammɔne ne nkontomposɛm.+ 14 Mewɔ afotu pa ne nyansa;*+Ntease+ ne tumi+ yɛ me dea. 15 Me na ahemfo nam me so di tumi,Na atumfo nam me so hyɛ adetrenee ho mmara.+ 16 Me na adehye nam me so di tumi,Na atitiriw nam me so bu atɛn wɔ trenee mu. 17 Medɔ wɔn a wɔdɔ me,Na wɔn a wɔhwehwɛ me no behu me.+ 18 Mewɔ ahonyade ne anuonyam,Ahode* a ɛwɔ hɔ daa ne trenee. 19 M’aba ye sen sika kɔkɔɔ, ɛsen sika kɔkɔɔ a wɔayiyi mu fĩ mpo,Na nea mede ma no, ɛsen dwetɛ amapa.+ 20 Menantew trenee kwan so,Atɛntrenee anammɔnkwan mfinimfini; 21 Mede agyapade a ɛsom bo ma wɔn a wɔdɔ me,Na mede nneɛma hyɛ wɔn adekoradan ma. 22 Yehowa bɔɔ me de fii ne kwan* ase,+Ne nnwuma a efi teteete no mu nea edi kan.+ 23 Ɔde me sii hɔ fii teteete,+Mfiase pɛɛ, ansa koraa na asaase reba.+ 24 Bere a subun biara nni hɔ no,+ na wɔawo me,*Bere a nsuti biara nni hɔ a nsu pii tene fi mu no. 25 Ansa na wɔde mmepɔw resisi hɔ,Na nkoko nnya mmae no, na wɔawo me, 26 Bere a onnya nyɛɛ asaase ne kwae a ɛwɔ so,Na omfii ase nyɛɛ asaase so dɔte no. 27 Bere a osiesiee ɔsoro no,+ na mewɔ hɔ;Bere a otwaa nsu ani kanko,*+ 28 Bere a ɔde mununkum sensɛn ɔsoro,*Na ɔyɛɛ subun no asuti, 29 Bere a ɔhyɛɛ mmara maa ɛpoSɛ ɛnsɛ sɛ emu nsu bu ne mmara so,+Bere a ɔtoo asaase fapem no,* 30 Ná mewɔ ne nkyɛn sɛ odwumayɛni a onim adwuma paa.+ Me na na ɔpɛ m’asɛm yiye+ daa nyinaa;M’ani gyee n’anim daa.+ 31 M’ani gyee n’asaase a ɔyɛe sɛ nnipa ntena so no ho,Na nnipa mma* na na wɔda me koma so. 32 Enti afei me mma, muntie me;Yiw, anigye ne wɔn a wɔfa m’akwan so. 33 Tie nteɛso+ na hu nyansa,Na mmu w’ani ngu so da. 34 Anigye ne onipa a otie me:Daa nyinaa, ɔba m’abobow ano anɔpatutuutu,Ɔtwɛn wɔ me pon ano;* 35 Efisɛ nea ohu me no benya nkwa,+Na Yehowa begye no atom. 36 Nanso nea obu n’ani gu me so no, opira ne ho,*Na wɔn a wɔtan me no dɔ owu.”+
^ Nt., “nnipa mma.”
^ Anaa “mu da hɔ.”
^ Anaa “nyansa a wɔde bɔ bra.”
^ Anaa “n’adwuma.”
^ Anaa “wɔakyem yayaayaw awo me.”
^ Anaa “Bere a ɔyɛɛ baabi a ayɛ sɛ nea wim ne po reyɛ abom no.”
^ Nt., “ɔde tim hɔ pintinn.”
^ Anaa “otwaa asaase hye no.”
^ Anaa “adasamma.”
^ Anaa “m’apongua ho.”
^ Anaa “opira ne kra.”